UsabilityHub: Manomeza ary makà valin-teny na fampiasana azo ampiasaina | Martech Zone
UsabilityHub: Manomeza ary Makà valin-teny na fampiasana azo ampiasaina
Alarobia, Jolay 1, 2015 Alarobia, Jolay 1, 2015 Douglas Karr
Tsy maintsy nanatrika ny Mandehana any amin'ny Marketing inbound fihaonambe notontosain'ny isam-paritra Element Three. Hetsika nahafinaritra io niaraka tamin'ny filaharan'ny mpandahateny mitaona aingam-panahy sy mahaliana. Ny iray tamin'ireo mpandahateny dia Oli Gardner, mpiara-manorina ny Unbounce izay niara-nanangona iray heck ny famelabelarana momba ny maha-zava-dehibe sy ny fiantraikan'ny fitsapana.
Hizara ny sasany amin'ny famelabelaran-kevitra nomen'i Oli amin'ny lahatsoratra ho avy izahay, saingy te hizara ny iray amin'ireo fitaovana nampahafantariny anay izahay momba ny tena tiany… FampiasanaHub. UsabilityHub dia mamela anao hizara ny famolavolana logo farany anao hahitanao ny vokany, hizara kinova samihafa amin'ny pejy hahitana hoe iza no tianao kokoa, na hahazo hevitra momba ny toerana mety hitetezan'ny mpampiasa eo amin'ny tranokalanao hahita zavatra.
Ianao dia afaka Hiditra Mpikambana tsy andoavam-bola ary lasa mpampiasa ny tranonkala hanome valiny ho an'ny mpampiasa hafa. Maimaimpoana ny valinteny avy amin'ireo mpanapa-kevitra anao. Ny valiny voaray avy amin'ny vondrom-piarahamonina UsabilityHub dia mitentina 1 isaky ny varotra. Ny valiny avy amin'ireo mpanapa-kevitra momba ny demografika manokana dia mitentina isa 3 avy. Afaka mahazo mari-pankasitrahana ianao amin'ny alàlan'ny fitsapana ho an'ny hafa na afaka mividy ny anao manokana. Raha lasa mpikambana Pro ianao, dia mahazo 50% amin'ny vidin'ny trosa.
Ity misy ohatra tsara iray izay nanandraman'ny orinasa iray ny safidin'ny fametahana tab ho an'ny tranonkalany:
UsabilityHub dia manana fitsapana fampiasana 4 azo isafidianana
Fitsapana dimy faharoa - Fitsapana dimy segondra dia mampiseho ny volavolanao amin'ny mpanapa-kevitra mandritra ny dimy segondra fotsiny. Rehefa tapitra ny dimy segondra, dia apetraka amina fanontaniana maromaro notsipihinao ilay mpanapa-kevitra, toy ny Inona ny vokatra heverinao fa amidin'ity orinasa ity?, na Iza no anaran'ny orinasa?.
Kitiho ny fitsapana - Rakitra fitsapana Click iray izay tsindrio ny mpampiasa ny volanao. Ny tester dia angatahina hanaraka ny torolalana izay faritoinao, toy ny Aiza no kitikao hijerena ny kalesinao?, na Aiza no kitikao hifidiananao modely ho an'ny bilaoginao?.
Fitsapana preferences - Ny fanandramana preferences dia mangataka amin'ny tester mba hisafidy safidy roa hafa. Azonao atao ny mangataka amin'ireo mpanandramana hisafidy mifototra amin'ny toetra manokana (ohatra. Iza amin'ireo endrika ireo no azo itokisana kokoa?), na anontanio fotsiny izy ireo hoe iza no tian'izy ireo amin'ny ankapobeny.
Fitsapana ny fivezivezena Nav - Ny fitsapana ny Flow Nav dia mamaritra raha afaka mizaha fahombiazana amin'ny alàlan'ny famolavolana anao ireo mpitsapa. Mampakatra andian-dahatsoratra pejy ianao, ary manondro hoe aiza no mila tsindriana ilay mpanandrana raha te handroso. Ny tahan'ny fahombiazana sy ny tsy fahombiazan'ny mpitsapana dia voarakitra isaky ny dingana.
Tags: hevitry ny famolavolanahevitrausability hubfanandramana azo ampiasainafitsapana mpampiasa
Ny maha-zava-dehibe ny antso an-tariby amin'ny dian'ny mpanjifa